Changan NEV သည် Round B ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၅ ဘီလီယံ နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 25, 2022, 16:25ညနေ 2022/01/25 23:39:00 Pandaily
Chongqing Changan နယူး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် က တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၄. ၉ ၇၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ၈၆. ၅ သန်း)ရန်ပုံ ငွေများကို စွမ်းအင် နည်းပညာအသစ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက် ချဲ့ထွင် ခြင်းနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တည်ဆောက်ခြင်း အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သော Changan Automobile ၊ Southern Industry Asset Management နှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဘဏ် Boyu နံပါတ် ၁၊ Chengyuan ရန်ပုံ ငွေ၊ Wuhu Xinshi Xinhong ၊ CICC Keyuan Equity Investment Fund နှင့် Southern Industry Fund စသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ အသစ် များပါဝင်သည်။ ဤ အရင်းအနှီး တိုးမြှင့် ပြီးနောက် Changan Automobile ၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု ၄၈. ၉၅% မှ ၄၀. ၆၆% သို့ ကျဆင်းသွားပြီး အကြီးဆုံး ရှယ်ယာရှင် ဖြစ် နေဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Changan Automobile သည် Changan Automobile New Energy Strategy ကို Shangri-La Plan ဟု ခေါ်ပြီး ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ရိုးရာ လောင်စာဆီ ယာဉ် များ ရောင်းချ ခြင်းကို ရပ်တန့် ရန်နှင့် ထုတ်ကုန် လိုင်း တစ်ခုလုံးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Changan လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Changan Automobile ၏ Avatr နည်းပညာသည် ပထမဆုံး ကား သစ် E11 ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Changan NEV သည် ယူနစ် ၁၀၀၀၀၀ ကျော် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၃၀၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အရောင်း ရ ဆုံး မော်ဒယ် မှာ Changan Benben EV ဖြစ်သည်။ China Passenger Car Association Federation ၏အဆိုအရ Changan Benben EVs သည် ၇၆ ၀၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်။ Changan EV ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ Deng Chenghao က လာမည့် နှစ်တွင် ကား အစီးရေ ၂၁၀, ၀၀၀ သို့ နှစ်ဆ တိုးလာပြီး ၂၀ ၂၄ ခုနှစ်တွင် ကား အစီးရေ ၅၀၀, ၀၀၀ ကျော် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေသား စီးဆင်းမှု ကိုရရှိ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဲ့ ပထမ ၁၁ လအတွင်း တရုတ် ရဲ့ အကျိုးတူ အရင်းအနှီး နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ဟာ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် တွေအတွက် အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၅ ဘီလျံ နဲ့ ဘက်ထရီ ကဏ္ဍ မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆. ၂ ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့တယ်လို့ China Venture Capital Consulting Co., Ltd က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ် က ရေတွက် လျှင် Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) သည် ရှန်ကျန်း စတော့အိတ်ချိန်း မှ လက်ခံ ရရှိပြီး အတည်ပြုထားသော ယွမ် ၄၅ ဘီလီယံ တိုးလာပြီး တရုတ် စွမ်းအင် ကဏ္ new သစ် သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော် မြှင့် တင်ခဲ့သည်။
နည္းပညာ သုည ဒသမ ၄၅ သန္း ရရွိခဲ့သည့္ Golden Link ကုမၸဏီအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား မဲေပး
သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စြမ္းအင္သစ္မ်ားေရာင္းခ်မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ကားေျပးဆြဲမႈတို႔ကို အေျခခံသည့္ နည္းပညာျဖင့္ ယေန႔တြင္ သုည ဒသမ ၄၅ ယြမ္ (ေဒၚလာ ၆၉၄ သန္း) ျဖင့္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာလိုက္သည္။